ဦးဇဝန (နိုင်ကျဉ်းဟောင်း) – ရွက်လှပန်း ကိုစည်သူ နှင့် ယုံကြည်ချက်မော်ကွန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဦးဇဝန၊ ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၀
ထို့အတူပင် ဦးဇင်းတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ခရီးတလျှောက် ရက်စက်မှုတခုကြုံရလျှင် ရက်စက်မှုချင်း၊ အစော်ကားခံရတာတခုကြုံရလျှင် အစော်ကားခံရတာချင်း အလေး အပေါ့ ‘ဆ’ ကြည့်မိသည့် ဖြစ်ရပ်က ဒုနဲ့ဒေး။ မိမ်ိကိုယ်ပေါ်ကျလာသော ဒုက္ခ၊ သောကတို့ကို တခုနှင့်တခု ယှဉ်ထိုးကြည့်မိတာ ရှိသလို၊ အတူဖြတ်သန်းနေသော ရဲဘော်တို့ရဲ့ အနှိပ်စက်ခံရမှုတွေအပေါ် နှိုင်းယှဉ်မိတာတွေ ရှိသည်။ သာမန်ကြုံတွေ့ရမှုတွေထက် ထူးခြားလွန်းသည့် ဖြစ်ရပ်များပင်။ ဦးဇင်း ကြုံခဲ့ရသည့်အထဲ ထူးထူးခြားခြား အမှတ်ရနေမိသူတယောက်က ကိုစည်သူ။ ရွက်လှပန်းနဲ့ တင်စားရမယ့်လူမျိုး။ နေပြင်းလေ အဆင်းလှလေ၊ ဇွဲ အပူဒဏ် ရိုက်ချက်ပြင်းပေမယ့် ခေါင်းငုံမခံတဲ့ သတ္တိကြောင့် အရွက်ဆိုပေမယ့် ပန်းဆိုပြီး ဦးညွှတ်ကြရမြဲ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:အရှင်ဇ၀န (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း), ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း
One Response to ဦးဇဝန (နိုင်ကျဉ်းဟောင်း) – ရွက်လှပန်း ကိုစည်သူ နှင့် ယုံကြည်ချက်မော်ကွန်း
Catwoman on July 15, 2014 at 7:37 am
May be you shouldn’t focus too much on the past and prison life. It might be better to forget the past and live in the present. You might not be able to forgive but you can try to forget and enjoy the present